Banyere Anyị - Quanzhou Pingtai Engineering Machine Co., Ltd.
Quanzhou Pingtai Engineering Machine Co., Ltd. e guzobere na 1987, Mgbe ihe karịrị afọ 20 nke na-aga n'ihu mmepe na ọhụrụ .Pingtai aghọwo a China na-eduga na a ụwa ama emeputa. Ọ bụ ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ nke na -ahụ maka njikọta igwe nrụpụta ihe na akụrụngwa nrụpụta na ịre ahịa netwọkụ.
Ụlọ ọrụ Pingtai na-akwado '' iguzosi ike n'ezi ihe, ịdị mma dị ka mgbọrọgwụ '' nke ụkpụrụ ndị bụ isi, yana ọtụtụ ngwaahịa bara ụba, ọnụ ahịa ezi uche dị na ya, nkwa oge nnyefe na ọmarịcha ọrụ. Ngwaahịa na-exported n'ụwa nile, ibe ibe na ibe uru, mmeri mmeri, ọnụ ike ezi imekọ ihe ọnụ ohere na-enwe a mma n'ọdịnihu.
Ụlọ ọrụ Pingtai nwere njikwa ọgbara ọhụrụ na otu ndị ọrụ nka nka, njikwa zuru oke, akụrụngwa dị elu, teknụzụ klaasị mbụ, ọdịmma zuru oke. -mgbe ezigbo nkwado.Ọdịmma ngwaahịa erutela ọkwa mba ofesi.
Akara "PTZM" dabara na Komatsu, Caterpillar, Volvo, Hitachi, Hyundai, Kato na igwe ihe owuwu ama ama ndị ọzọ n'ụwa. Teknuzu ọkọlọtọ, mmepụta na nyocha nke ngwaahịa na -ewere ọnọdụ njikwa Japanese, na ịdị mma ruru ọkọlọtọ OEM.Ebufe ngwaahịa na South Asia, Japan, Korea, Europe, Middle East, America na obodo ndị ọzọ.
Ngwa Nrụpụta Hi-Tech
Ngwa ndị na -emepụta ihe na -anabata igwe CNC dị elu
Ike R&D siri ike
Ndị injinia anyị nwere ahụmịhe bara uru ruo ọtụtụ afọ wee mepụta ọtụtụ ngwaahịa ọhụrụ maka ndị ahịa. A nabata teknụzụ ahụ na ezigbo nzaghachi site n'aka ndị ahịa. Anyị nwere nyocha ụlọ na ikike mmepe n'ime ime ime, yana ọkwa ụlọ ọrụ dị elu na ibe ya, okpomọkụ. ọgwụgwọ, igwe, nnwale anụ ahụ na kemịkal, ikike njikwa mma. Kemgbe ebido, a na -ewere ike asọmpi PINGTAI dị ka teknụzụ.
Njikwa Nlezi Anya
Ngwa ndị a bụ tumadi okirikiri nchara nchara na nkenke nke enwere ike iji ya rụọ ọrụ na Ngwuputa.
Companylọ ọrụ ahụ nwere ndị otu nnwale ọkachamara, ngwaahịa site na nnwale ngwaahịa ọkara emechara na nnwale ngwaahịa emechara.
Ahaziri nha na ụdịdị dị. Nabata ịkọrọ anyị echiche gị, ka anyị rụkọọ ọrụ ọnụ iji mee ka ndụ bụrụ ihe okike.
Ndị na -agba egwu Rubber Track, Onye na -egwu ihe na -agba bọket, Bit ejedebela ugboro abụọ, Ike kpọchie, Iburu Track ala, Ihe mkpuchi ihe mkpuchi ịwụ,